Madaxweynaha Puntland oo kala diray Golayaashii deegaanka Degmooyinka Jariiban iyo Galdogob. |
Madaxweynaha Puntland oo kala diray Golayaashii deegaanka Degmooyinka Jariiban iyo Galdogob.
Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta si rasmi ah u kala diray golayaasha deegaanka Degmooyinka Jariiban iyo galdogob.
Dr Gaas oo safar ku maraya deegaanada dhaca gobolkaasi Mudug, islamarkaana haatan ku sugan degmada jariiban ayaa goob fagaare ah ka sheegay in xukuumadiisu balan qaaday isbedel sidaasi awgeedna ay la jaan qaadeyso isbedelka/
Waxa uu sheegay in uu kala diray maamuladii ka dhisnaa demooyinkaasi sidaasi awgeed uu u jeedinayo bulshada ku dhaqan degmooyinkaasi in ay 48 saac gudahooda ku soo doortaan maamul rasmi ah oo ka yimid rabitaanka shacabka islamarkaana ay ka hufan tahay dhaliili.
lama xaqiijin karo sababaha dhabta ah ee uu u kala diray madaxweynuhu maamuladii ka dhisnaa degmooyinkaasi marka laga reebo in la raacayo dariiqada isbedel ee ay xukuumadiisa ku timid.
Waxa uu maalmihii isaga iyo wafdi uu horkacayo safaro kormer ah ku marayeen madaxweynuhu deegaanada dhaca gobolkaasi Mudug isago maray habeenona seexday degmooyinka qaar siiba garacad iyo bali busle iyo jariiban uu hada ku sugan yahay.